Ereyga Wakiilku wuxuu kuu furan yahay adiga oo wada shaqeynaya Wakiilada Wakiilada ee Wakiilada Baasaboorka Weyne waxay kafaala-qaadayaan shirkadaha bixiya: Iskudhaftirka ololayaasha ku saabsan helitaanka wereld waxay kuu abaabulaan Nidaamka Dhexdhexaadinta.
Qof kasta wuxuu ubaahan yahay Rhapsody of Realities sida hage barashada Kitaabka Quduuska ah, gaar ahaan wasiirrada Injiilka. Ku soo biir shabakad faafaahin, waxaanad ka caawisaa wasiirada adduunka oo dhan inay ogaadaan hodantinnada hodanka ah ee Ereyga Rabiyada Dhimashada.
Waxaan nahay bulsho internetka ah oo dadku jecel yihiin kuwaas oo ka faa'iideysanaya tiknoolajiyada si ay saameyn ugu yeeshaan adduunka internetka leh Injiilka. Ku soo biir Iskuduwaha Raadiyaha Rhapsody (RIN) maanta!
Ka mid noqo shabakadeena tarjumayaasha caalamiga ah, kuwaas oo hadafkoodu yahay in Ereyga Ereyga laga dhigo oo la heli karo dhammaan dadka luqadda ay si fiican u fahmaan.
Shabakada salamka ducada ee Rhapsody app
Shabakada Iskaashatada Rhapsody ee Iskaashatada Shabakadda Web App waa barnaamij loogu talagalay qof kasta oo ku hawlan inuu ku tukado faafinta ereyga Ilaah ee aduunka oo dhan, iyada oo loo marayo Nidaamka Nolosha. Isku qor maanta, soo dir codsigaaga duco oo aynu ku biirno gacmaheena saameyn ku yeelashada nolosha dadka kale iyo nolosheena!
Qaybta Qorshaha Wadaagista Qorshaha Cusub
Istaraatiijiyada Qaybinta Qorshaha Cusub ee Rhapsody waa sahlan oo sahlan in la isticmaalo barnaamijka shabakada oo fududeynaya in la wadaago maqaalada maalinlaha ah. Waxay dhiirigelineysaa dib-u-qaybinta iyo isla markaa waxay bixisaa diiwaanno sax ah oo lagu qaybiyo; dhammaan hal meel !!
Wax badan ku samee xaalada dhabta ah! La soco Rhapsody TV, Raadiyaha Socdaalka iyo Raadinta Rhapsody.
Miyaad dooneysaa inaad barato sida loo noolaado nolol guuleysi leh iyo ujeedo leh? Miyaad raadineysaa tacliin feker ah iyo jawaabo Word ku salaysan su'aalaha badan ee nolosha? Qaybo badan oo hodanka ah ee buugaagta la subkay ayaa kuu horseedaya waayo-aragnimo abaalmarin ah oo noloshaadana ka beddesho weligaa! Boggani waa barta tixraaca ee dhammaan buugaag by qoraa ugu fiican, Pastor Chris Oyakhilome D.Sc., D.D.
App Rhapsody Mobile App
Waayo aragnimo badan oo ka mid ah dhabarka dhabta ah ee goosashada! Waa jiil cusub oo cusub oo dhiiri gelin leh iyo tamarta rabbaaniga ah oo dhan oo lagu duuduubay quruxda loo yaqaan 'Rhapsody of Realities' Mobile app.